Ndepụta Ahịa M na-aga n'Onlinentanet na Usoro Mkpa | Martech Zone
Ndepụta Ahịa M na-aga n'Onlinentanet na Iwu Mkpa
Sunday, December 2, 2012 Wednesday, December 12, 2012 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ ihe achọrọ iji mezuo usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị, mana ọ na-eju m anya na ihe kacha mkpa na ụlọ ọrụ na-etinye ihe ọ bụla na ndepụta nyocha. Dị ka anyị na-na ọhụrụ ahịa, anyị na-achọ iji hụ na azum na kasị emetụta na-emezu akpa… karịsịa ma ọ bụrụ na ha na mfe. Ndumodu: ahia ahia na ahia ahia ndi mmadu adighi nfe.
Weebụsaịtị - Ndi ụlọ ọrụ ahụ nwere ebe nrụọrụ weebụ na-akpali nzaghachi site n'aka ndị na-ege gị ntị na ọ bụ isi iyi ozi a tụkwasịrị obi yana ngwaahịa na ọrụ ahụ ga-aba uru maka mkpa onye ọbịa?
njikọ aka - Saịtị ahụ nwere ụzọ iji zụọ ma ọ bụ rịọ nzaghachi site na onye ọbịa? Ọ bụrụ na ị naghị ere ngwaahịa, nke a nwere ike ịbụ peeji ọdịda na ụdị iji nakọta ozi onye ọbịa na ahia maka ngosipụta ma ọ bụ nbudata ụdị ụfọdụ.
mmesho - Kedu nchịkọta ngwaọrụ ị nwere iji tụọ ọrụ ahụ ma nyere gị aka imeziwanye arụmọrụ ahịa gị n'ịntanetị?
Sales - Kedu ka ụlọ ọrụ si eso ndị ọbịa na-etinye aka? Ndi data weghaara na CRM? Ma ọ bụ ọ na-agbachapụ usoro akpaaka ahịa iji akara ma zaghachi na ndu ahụ?
email - have nwere mmemme email nke na-enyekarị ndị ahịa ọdịnaya na / ma ọ bụ atụmanya bara uru nke ga-eme ka ha laghachi na saịtị gị ma gbanwee ha ka ha bụrụ ndị ahịa?
mobile - Ndi saịtị kachasị maka nlele mkpanaka na mbadamba? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na-efu ọtụtụ ndị ọbịa nwere ike ịchọ ịme nyocha na akara gị mana ị na-apụ n'ihi na etinyereghị saịtị gị maka nlele ha.
search - Ugbu a ị nwere nnukwu saịtị na usoro siri ike maka inweta ndu, kedu ka ị ga - esi bulie ọnụọgụ dị mkpa? Gị na saịtị ahụ ga-wuru na a sistemụ njikwa ọdịnaya ejiri chọọ maka ọchụchọ. Ọdịnaya gị kwesịrị iji Keywords n'ụzọ dị irè.
Obodo - Ndị ọbịa na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ọ na-achọ ha na mpaghara? You kwadoro ọdịnaya gị iji kwalite ngwaahịa na ọrụ gị na mpaghara? Nwere ike tinye peeji nke ahụ leba anya na ịchọta mpaghara usoro. Ekwesịrị ịdepụta azụmahịa gị na akwụkwọ ndekọ azụmaahịa Google na Bing.
Nyocha - Enwere saịtị nyocha maka ụdị ngwaahịa na ọrụ ị na-enye? Edepụtara azụmahịa gị ma ọ bụ ngwaahịa gị na ha? Have nwere ụzọ ị ga-esi jiri nlezianya nyochaa saịtị ndị ahụ na ndị ahịa gị ugbu a? Saịtị dị ka Ndepụta Angie (onye ahịa) na Yelp nwere ike ịchụ ọtụtụ azụmahịa!
content - have nwere ụzọ nke isi na-ebipụta ọdịnaya na ngalaba gị nke bara uru nye ndị na-ege gị ntị? Inwe blọọgụ ụlọ ọrụ bụ ụzọ dị egwu iji dee ihe na-adịbeghị anya, oge na-adaba na nke dị mkpa nke ndị na-ege gị ntị chọrọ. Jiri igwe dị iche iche mee ka ndị na-ege ntị dị iche iche… ederede na ederede blọgụ, eserese na eserese, mmelite instagram na infographics, ọdịyo na pọdkastị, na vidiyo na Youtube na Vimeo mmelite. Echefukwala ngwaọrụ mmekọrịta! Calculators na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ịtụnanya n'ịdọta ma dọta ndị na-ege ntị.
Social - have nwere akaụntụ Twitter? Ibe LinkedIn? Ibe Facebook? Peeji Google+? Nkọwapụta Instagram? Pinterest peeji nke? Y’oburu n’inwe ike inwe ezigbo obi uto ma dobe uzo nkwukọrịta, site na mmekọrịta, ya na ndi ahịa gi na atụmanya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike inye aka mee ka ozi gị baawanye na netwọkụ ndị ọzọ dị mkpa gbasara atụmanya site na iwulite obodo ndị na - akwado ya. Kedu ka ị si eji ndị fans gị iji kwalite azụmahịa gị?
Promotion - Ugbu a ị nwere ụzọ niile iji mepụta, zaghachi ma bulie ozi gị, oge eruola ịkwalite ya. Akwụ ụgwọ ọchụchọ, nkwado akwụkwọ, mgbasa ozi Facebook, mgbasa ozi Twitter, mgbasa ozi Youtube, mmekọrịta ọha na eze, pịa akụkọ… ọ na-adị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji kwalite ọdịnaya gị na netwọkụ ndị ọzọ dị mkpa. Gaghị enwe ike ịbanye na netwọkụ ndị a naanị site na ọdịnaya dị ukwuu, mana ị na-enweta ohere na-enyekarị site na mgbasa ozi.
Automation - ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ajụ ase na netwọkụ na-etowanyewanye kwa ụbọchị, mana akụ anyị na-enye ngalaba na-ere ahịa anaghị agbasa n'otu ọnụego. Nke a na-eme ka akpaaka dị ugbu a. Ikike ibipụta ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị, nyochaa na ịzọ arịrịọ sitere na netwọkụ ọ bụla ma nye ya akụ ziri ezi, ikike ị ga-akara na ịza nzaghachi na-akpaghị aka dabere na ọkwa ha, yana ụzọ iji nakọta data a na sistemu eji arụ ọrụ… akpaaka bụ isi ihe na - eme ka ị na - azụ ahịa n’ịntanetị.
Di iche iche - nke a nwere ike ọ gaghị edepụta ọtụtụ ndepụta, mana ekwenyere m na ịnwe netwọkụ nke ndị ọkachamara iji nyere gị aka na azụmaahịa ịntanetị gị dị mkpa. Imirikiti ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa nwere ọpụrụiche ha nwere na ya. Mgbe ụfọdụ ha na-enwe ahụ iru ala nke ukwuu na onye na-ajụ ihe ha na-ekele na-ebute ụzọ na usoro ndị ọzọ a na-efu kpamkpam. Jụọ ọkachamara na-ere ahịa email, dịka ọmụmaatụ, maka iwulite obodo Facebook ma ha nwere ike ịkwa gị emo - n'agbanyeghị ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ọtụtụ azụmahịa na Facebook. Gbaziri site na nka nke netwọkụ gị na - enye gị nghọta n ’ịmatakwu ọmụmụ, ngwa ndị ọzọ, na ohere ndị ọzọ iji bulie mbọ ị na - agba n’ịntanetị.
Testing - Site na usoro ọ bụla nke usoro ọ bụla, ohere ịme A / B na ọtụtụ nnwale bụ nke ekwesighi ileghara anya. (Emechara m leghara ya anya ebe a na ekele Robert Clarke of Op Ed Ahịa, anyị kwukwara ya!)
Nke a bụ ihe m kacha mkpa ka m na-enyocha azụmaahịa azụmaahịa n'ịntanetị ma ọ nwere ike ọ gaghị abụ nke gị n'ụzọ ọ bụla. Kedu ihe ọzọ ị na-achọ na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị? Ọ dị ihe funahụrụ m? Enwere m iwu nke ihe ndị m na-ebute ụzọ?
M tụlere ndepụta nyocha a na Podcast na nso nso a:
Tags: mgbasa ozibrandakakabarededesignfacebook mgbasa ozinchọta mpagharamarketingMobile na Mbadamba ụrọonline ahịanjikarịchasearch engine njikarịchaChọọ MarketingAmbadambawebsite
Etu esi tinye adreesị email na LinkedIn
Nduzi Software bu Boosting Business
Dee 3, 2012 na 11: 22 AM
Akwa blog Douglas, M ga-agbakwunye CRO (Ntughari Ọnụego Mgbanwe) site na A / B na Multivariate ule na listi - a na saịtị nwere ike na-n'ezie kachasị site ule, ule, ule 🙂
Dee 3, 2012 na 11: 44 AM
Pụtara ìhè, ị bụ nnọọ nri - M ga-agbakwunye na!
Dec 3, 2012 na 12:15 PM
Daalụ Douglas. On a sidenote, I see Delivra is your email sponsor (n'elu aka nri aka nri). Anyị na ha na-arụkọ ọrụ ma bụrụkwa nnukwu Fans, ga-akwado ha nke ukwuu 🙂
Dec 3, 2012 na 1:55 PM
Neil na ụlọ ọrụ ya dị ịtụnanya, Robert. Ha na ndị dị otú ahụ a aka-na ụlọ ọrụ na ndị ahịa ha… ọ bụ egwu na-ekiri ha na-eto eto.